Soomaaliya oo kamid noqotay 20-ka dal Afrika ee ugu faafista badan Coronavirus. - Awdinle Online
Soomaaliya oo kamid noqotay 20-ka dal Afrika ee ugu faafista badan Coronavirus.
Waaxda Cilmi-baarista ee Hay’adda Iftin Foundation ayaa xog uruurin ay sameysay waxa u ogaatay sida ay u kala sareeyaan dalalka Afrika ee uu gaaray Cudurka Coronavirus.
Warbixinta waxa ay ku dul istaagtay labaatanka dal Afrika ugu badan ee saameynta taban ku yeeshay Fayruska Corona, laga soo bilaabo markii uu cudurka laga kiiskii ugu horeeyay laga diiwaangeliyay Soomaaliya.
Iftin Foundation waxa ay sidoo kale sheegtay in marka la eego tirada kiisaska dhimasho iyo kuwa uu ku dhacay Covid-19 in Soomaaliya ay ka dhigeyso dalka labaad ama kaalinta labaad gelineyso liiska 20-ka wadan ee Afrika.
Wasaaradda Caafimaadka XFS waxa ay sheegtay in kiisaska Cudurka Coronavirus ee Soomaaliya uu sii kordhayo, waxaana sidoo kale korortay dadka u dhintay, iyada oo ay jiraan shaqsiyaad kasoo ka bogsaday (Ka caafimaaday) Fayruska.
Previous articleGuddoomiyaha Gobolka Sh/Hoose oo ka hadlay weerarkii qaraxyada ahaa
Next articleMADAXWEYNE FARMAAJO OO FARAY XUKUUMADDA IN AY KOR U QAADDO TAYADA CAAFIMAAD EE XARUMAHA KARANTIILKA CUDURKA COVID-19